XCMG excavator XE235C Uyilo lulonke kunye nokusasazwa komthwalo we-asi ziqondakala ngakumbi ukufezekisa uzinzo oluhamba bhetele kwaye isantya esiphezulu sokuhamba sifikelela kwi-40km / h ukuqonda isantya sokudlulisa indawo ngokukhawuleza.
XCMG motor isilinganisi
XCMG motor grader isebenzisa Dongfeng Cummins 6BTA5.9-C180-II injini idizili turbocharged, nto leyo eye torque enkulu imveliso kunye novimba reserve amandla lomlingani kunye nokusetyenziswa amafutha eliphantsi.
XCMG mqengqeleki wendlela
UMinyan uhlala egcina ifilosofi yenkonzo "Ukubaleka kuKholo, Gcina iSithembiso, Gxila kwiiNkxalabo zabaThengi", sizinikele koko kufunwa ngumthengi, kwaye sinike iimveliso kunye nenkonzo ngokusebenza okuphezulu kunye nexabiso elifanelekileyo.
XCMG truck nendwe
Iindlela ezisibhozo zamalungelo awodwa omenzi wechiza ziqinisekisa ukulungeleka, ukusebenza ngokukuko kunye nolondolozo lwamandla okuphakamisa, ukujikeleza, kunye neenkqubo zokumisa.
XCMG ivili umlayishi
Umthwalo onzima kwimeko enamatye; Isixhobo esisebenzayo kunye nesakhelo esingasemva nesomva sibhodi eshinyeneyo yamandla aphezulu, ukuhanjiswa okufanelekileyo kunye nomthamo wokuthwala onamandla.